Metro Hostel Inovhura muPodol Dunhu reKiev - RayHaber
mushaTHE WORLDzvekuEurope38 UkraineMetro Hostel Inovhura muPodol Dunhu reKiev
26 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 38 Ukraine, zvekuEurope, THE WORLD, Railway, GENERAL, KENTİÇİ Rail Systems, musoro wenyaya, Metro, VIDEO 0
Metro Hostel, yekutanga hostel muUkraine kushandisa yekare subway ngoro, yakavhurwa muPodol mudunhu reKiev.
Yakagadzirirwa ngoro, imwe neimwe kamuri inotumidzwa zita kubva kune yakakurumbira chiteshi kubva pasi penyika system. Pamadziro emakamuri, ruzivo rwakapihwa nezve chiteshi.
MunaDecember 2017 maviri ex-ngoro akatengwa naMihael Galparin nethenda ye546 yechiuru UAH. Pakutanga, Galparin, uyo anga asina ruzivo rwekuita nengoro idzi, akafunga 6 mushure memwedzi.
Mune ngoro dzakashandurwa kuva 8 makamuri, 4 vanhu vanogona kugara mune imwe neimwe kamuri. Mari yekugara pamusoro pehusiku inotaurwa se400 UAH. (Ukrhaber noti: Kuchenjera kunooneka se450 UAH kana 105 TL.)
(Source: Ukrhab ndiye)
Kuzadzikiswa kwemugwagwa muAlkancak, Izmir 06 / 06 / 2016 Mudunhu reAlsancak reİzmir, mugwagwa wakapera. Kufambisa mumugwagwa iko zvino kwakapihwa nemairi sheriffs. Prime Minister Binali Yildirim, Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu, Maritime nenyaya dzezvekudyidzana, Izmir, Alsancak achitetepa kwemusuwo pamusuwo wekupedza mhinduro yekushomeka kwemotokari kwemakore mushure memirairo yakapihwa yekusaina kweiyo protocol, General Directorate yeTCDD neIzmir Metropolitan Municipality yakasaina. Zvikwata zveMetropolitan Municipality zvakatanga kushanda nekukurumidza, TCDD'ye yakaparadza madziro egadheni. About 1 metres yakadzoserwa…
Izmir itsva dzematokisi emitambo akatanga basa (Photo Gallery) 18 / 11 / 2016 İzmirin itsva pevhu nezvitima vakapinda basa: 240 95 miriyoni makirogiramu rengarava pevhu mota kutsivira kuti vane mari kuti Izmir Metropolitan Municipality, yava raparurwa paaizoshanyirwazve 5 vagonluk wokutanga chitima yakatarwa zvekushandisa matsva. Vashandi veMetro vakakwazisa vatasvi vekutanga vechitima chitsva nemaruva. Izmir vanhu, "yacht concept" yakasiyana-siyana nebhajiro yemugwagwa yakapa mavara akazara. nezvitima matsva ane otomatiki musuo ezvinhu chinozoiswa kokutanga munyika, ichipa yakanyarara uye anotsvedzerera bhiza nokuda rabha zvinhu pakati mumavhiri. Izmir Metro, pakaberekwa vose kunopfuurira kugadzirwa seti vatsva China, kuguma March 182 mota achava neboka rengarava huru. Izmir ...
CHP sachigaro weKılıçdaroğlu nekubatanidzwa kweMasoja akapinda muChina Car 10 / 06 / 2012 CHP mutungamiri Kemal Kılıçdaroğlu, kururamisira, ichiti kuti dambudziko zvikuru, "Kana iwe kunzwisisa kuti chivimbo zvinozununguka munyu chemubhotoro kuti kururamisira muvanhu," akadaro. First Fatsa Ünye dzoruwa uye CHP District sachigaro CHP mutungamiri Kılıçdaroğlu Hurukuro inokosha, ipapo akauya Army Mayor Seyit Torun akashanyira. President Torun Munguva kushanya, President Kılıçdaroğlu Army Orduspor'un hembe uye tafura chipo ane maonero etti.kılıçdaroğl, ipapo promenade, pedyo Ataturk Monument, asuma waya motokari atasve pamwe 2 350 28 metres urefu uye cabinet. Vachitaura pamberi kuvhura CHP mutungamiri Kemal Kılıçdaroğlu, "hondo chinhu chaizvo akanaka ...
Kars Muddy T-Bar Teleski Yakatangwa 21 / 03 / 2009 Kars madhaka T-bhaa the vachasimudza Achibhedhenurwa: Crystal chando uye mupaini kushumira musango madhaka T-bhaa the vachasimudza Zvivako, Sarikamish rava imwe nzira the nzvimbo yokupinda skiers kupinda basa 2009 yechando mwaka. Magadzirirwo: Length - 923 Elevation Difference mm Speed ​​234 - 0-3 M / s capacity - 800 S. / h Nhamba Hanger - 71 Engine Power - KW Rope dhayamita 80 - 18 mm
Kutanga Kutengesa Motokari Munharaunda Yakapinda Service muGaziantep 31 / 05 / 2011 MuGaziantep, iyo yakarondedzerwa seParis yeEastern uye Southeastern Anatolia Region, iyo motokari yemotokari uye gomo rakafuridzirwa, iyo yakatumirwa mupaki naMuwa weChainbey, yakakonzerwa zvikuru nenhengo dzeprototi uyewo vagari venyika. Sahinbey Municipality Karatas, Yeditepe, Güneykent neSahintepe munharaunda pakati pekuvhura kweSahinbey Park panzvimbo ye280 yaiva nzvimbo yemifananidzo yakaisvonaka. -soro Turkey mu kutamba boka vana, rine 20 MiniaTurk basa, dzimba dzemitambo, 950 kuitika yokupakira mita apo mvura nokupembera uye Concerts, uye kudzokera walkable gomo wire motokari uye ngoro vakaiswa pabasa. Gavhuna weGaziantep Süleyman Kamçı, AK Party General Gaziantep
Metropolitan Mobilization mune Zvekufambisa Networks
Kuzadzikiswa kwemugwagwa muAlkancak, Izmir
Izmir itsva dzematokisi emitambo akatanga basa (Photo Gallery)
CHP sachigaro weKılıçdaroğlu nekubatanidzwa kweMasoja akapinda muChina Car
Kars Muddy T-Bar Teleski Yakatangwa
Kutanga Kutengesa Motokari Munharaunda Yakapinda Service muGaziantep
Gomo Eren Ski Resort Yakapinda Mubasa
Sachigaro mukati me1 km 600 km kuIgaga akaiswa mubasa
Atabarı Ski Center ski lift system yakaiswa mubasa
Bhiriji remazuva ano rinobatana nemapaki maviri mumapuddles
Yenimahalle-Şentepe cable car line yakaiswa mubasa